हिंसात्मक राजनीतिको पुनरावृत्ति : अनावश्यक/अस्वीकार्य- विचार - कान्तिपुर समाचार
हिंसात्मक राजनीतिको पुनरावृत्ति : अनावश्यक/अस्वीकार्य
मंसिर २५, २०७७ सम्पादकीय
मोरङको पहाडी बस्तीमा मंगलबार एक शिक्षकलाई घाँटी रेटेर मारिएको घटना मुलुकमा भइरहने जघन्य अपराधको थप एउटा तथ्यांक मात्र होइन । बेलैमा सावधान भइएन भने यसले त्रासदीपूर्ण भविष्यको डरलाग्दो संकेत पनि बोकेको छ ।
किनभने, मिक्लाजुङ–१, रमितेस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको हत्याको जिम्मेवारी नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको एउटा अतिवादी राजनीतिक समूहले लिएको छ । यो त्यही समूह हो, जुन हिजो मुलुकमा १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरेको तत्कालीन माओवादीबाट चोइटिएको थियो र अहिले यो मूलधारको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिबाट बाहिरै बसिरहेको छ । झन्डै डेढ दशकअघि अवतरण भइसकेको सशस्त्र द्वन्द्वकै धङधङीमा रहेको यो समूहले विभिन्न स्थानमा सैन्य अभ्यास गरिरहेको खबरहरू सुनिनु र पुरानै हत्या–हिंसाको झझल्को दिने गरी मंगलबार यस्तो आततायी घटना हुनु पक्कै पनि निको चाल होइन । यसबाट मुलुकमा फेरि हत्या–हिंसाको शृंखला सुरु हुन लागेको त होइन भन्ने संशय पैदा भएको छ ।
यो घटनाविशेषको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी संलग्न दोषीलाई कारबाहीको दायरामा त ल्याउनुपर्छ नै, तर त्यतिले मात्रै पनि राजनीतिक आवरणमा हुने यस्तो खाले अपराध रोकिनेवाला छैन । तसर्थ, यस्ता हिंस्रक क्रियाकलापले समाज र मुलुकमा पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावको समयमै उचित आकलन गर्नबाट सरोकारवाला कोही पनि चुक्नु हुँदैन । चन्द समूह स्वयंले बेलैमा देश र जनताप्रति जिम्मेवार भई यस्ता घटनाहरू त्यागेर आफूलाई मूलधारको राजनीतिमा समाहित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले पनि आफ्ना तर्फबाट उचित वातावरण बनाउनुपर्छ । र, यस्तो बर्बर चालमा मुलुकको कुनै पनि पक्षले आफ्नो कुण्ठाको रोटी सेक्ने प्रयास गर्नु हुँदैन । मुलुकमा फेरि हिंसा–प्रतिहिंसाको दुश्चक्र घुम्यो भने त्यसले कसैलाई छाड्नेवाला छैन । तसर्थ, निन्दा र भर्त्सनामा मात्रै सीमित नभएर यस घटनालाई सबैले विहंगम दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ ।
समूहको मेची–कोसी ब्युरोले विज्ञप्तिमा भनेको छ– आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई पक्राउ गराउन प्रहरीमा सुराकी गरेकाले श्रेष्ठमाथि ‘कारबाही’ गरिएको हो । समूहको आरोप सत्य–असत्य जे भए पनि व्यक्तिहत्या गर्ने इजाजत कसैलाई छैन । आफूलाई राजनीतिक समूह बताउनेले त झन् विशुद्ध आपराधिक जत्थाको जस्तो नृशंस व्यवहार कदापि देखाउनु हुँदैन । राज्यविरुद्धको घोषित सशस्त्र द्वन्द्वमै पनि व्यक्तिहत्यालाई जायज मानिँदैन, पछि द्वन्द्वोतर समयमा भएपनि दोषीले त्यसवापत दण्ड भोग्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेत चन्द समूहले सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक घोषणा गरिसकेको अवस्था पनि होइन । तसर्थ, व्यक्तिहत्याको कायर राजनीतिबाट यो समूह माथि उक्लनैपर्छ । उनीहरूले बुझ्नुपर्छ– मुलुकलाई अनिश्चयको भँड्खालोमा जाक्नेबाहेक व्यक्तिहत्याको राजनीतिले कसैलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन । यसबाट केवल देशले प्रगतिको फड्को नमारोस् र कुनै न कुनै घरेलु समस्यामा रुमल्लिरहोस् भन्ने बद्‌नियत कसैमा रहेछ भने, उनीहरूको मनोकांक्षा मात्रै पूरा हुनेछ । त्यसैले, विधिको शासनद्वारा देश बनाउन प्रयोग हुनुपर्ने राजनीतिक समूहको ऊर्जा मुलुक र जनताको भविष्य डढाउनमा खेर फाल्नु हुँदैन ।
समय नघर्कंदै चन्द समूह प्रस्ट हुनुपर्छ– मुलुकमा अब केका लागि हत्या–हिंसा गर्ने ? हिजोको तत्कालीन माओवादी वा त्यसको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालको नक्कलको भद्दा प्रहसन अब केका लागि ? हिजोको सशस्त्र युद्धका कतिपय कार्यसूची र दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा उभिएर मुलुकको राजनीतिले युगीन कोल्टे फेरिसकेको छ । यो स्विकार्न चन्द समूहलाई किन यति धेरै सकस परेको हो ? के अढाई सय वर्ष पुरानो र समय पाउनासाथ निरंकुश चरित्र देखाइहाल्ने राजतन्त्रको स्थानमा गणतन्त्र ल्याउनु उपलब्धि होइन ? के एकात्मक राज्यव्यवस्थाको सट्टामा देश संघीय संरचनामा जानु र सात प्रदेशका अलावा मुलुकमा सयौं बलिया स्थानीय सरकारहरू बन्नु राजनीतिक जित होइन ? के धर्मनिरपेक्षतादेखि राज्यका निकायहरूलाई समावेशी बनाउन यसबीचमा भएका पहलहरू प्रगतिशील कदम होइनन् ? आफ्नो अगाडिको मार्ग सुनिश्चित गर्नुअघि चन्द समूह यी प्रश्नहरूप्रति घोत्लिनैपर्छ ।
यो सत्य हो कि, कतिपय राजनीतिक उपलब्धिका बाबजुद आम नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । राज्यको सेवा प्रवाह सुध्रिएको छैन । तर त्यसका लागि के अब फेरि कोही ‘जंगल’ नै जानुपर्छ र ? अबका सुधारहरू त प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमार्फत सत्तामा सहभागी भएर वा प्रतिपक्षमा बसेरै गर्न सकिन्छ । कि चन्द समूहलाई यो बाटो कठिन लागेर सत्ताको सिँढी सजिलै चढ्न व्यक्तिहत्याको लघुमार्ग प्यारो लागेको हो ? फेरि, त्यही बाटो पनि अब पहिलेजति सजिलो कसरी होला र ? बल्लबल्ल शान्तिको सास फेर्न पाएका जनताले फेरि हिंसाको राजनीतिलाई कसरी साथ देलान् ? तसर्थ, अहिले हासिल भएका उपलब्धिहरूप्रति नै विरक्त लागेको होइन भने चन्द समूहले ढिलो नगरी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक मार्ग नै समाउनुपर्छ । यही व्यवस्था र प्रणालीभित्र बसेरै सुधारका प्रयत्नहरू गर्नुपर्छ ।
राज्यले पनि कुनै कसर बाँकी नराखी यो समूहका नाममा हुन थालेका आपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । साथै वार्ताको माध्यमबाट उसलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन पनि अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ । नागरिक समाजलगायत मुलुकका प्रबुद्ध वर्गको पनि यसमा ठूलो भूमिका हुन्छ, उनीहरूले व्यक्तिहत्याको राजनीतिको गौरवगाथा गाउने काम भुलेर पनि गर्नु हुँदैन । सबैको विवेकपूर्ण प्रयासले मात्रै यो समूह शान्तिको बाटोमा फर्कन सक्छ । घोर दक्षिणपन्थीहरूको सलबलाहट बढिरहेको यो बेला अर्को उग्र वामपन्थी उपद्रव मुलुकले कसैगरी थेग्न सक्दैन । मुलुक र जनताप्रति जिम्मेवार बनी सम्बन्धित समूह र सरकार दुवै यसप्रति उत्तिकै सजग रहनुपर्छ ।
प्रकाशित : मंसिर २५, २०७७ ०८:१५
रियल अन्तिम १६ मा, इन्टर बाहिरियो
मंसिर २५, २०७७ एजेन्सी
लन्डन — करिम बेन्जेमाले हेडबाट गरेको दुई गोलमा रियल म्याड्रिडले बुधबार युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा बोरुसिया मुन्छेनग्लाडबाखलाई २–० ले हरायो । यो जितपछि रियल अन्तिम १६ मा पुग्न सफल रह्यो । मुन्छेनग्लाडबाख पनि समूह ‘बी’ बाट नकआउट चरण पुग्ने अर्को टिम बन्यो ।
बेन्जेमाले नवौं मिनेटमा पहिलो र ३२औं मिनेटमा दोस्रो गोल गरेका थिए । समूहको अर्को खेलमा इन्टर मिलान र साख्तर डोनेस्कले गोलरहित बराबरी खेलेपछि मुन्छेनग्लायडबाख अगाडि बढ्न सकेको हो । यो नतिजाले इन्टर भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ ।
जिनेदिन जिदानको रियल १० अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ भने मुन्छेनग्लाडबाख आठ अंकसहित दोस्रोमा । समूह ‘ए’ मा डिफेन्डिङ च्याम्पियन बायर्न म्युनिखले लोकोमोटिभ मस्कोलाई २–० ले हरायो । यस्तै एटलेटिको म्याड्रिडले दोस्रो चरणमा स्थान सुरक्षित गर्न साल्सबर्गलाई २–० ले हरायो ।
समूह ‘सी’ मा म्यानचेस्टर सिटीले मार्सेलाई ३–० र पोर्टोले ओलम्पियाकोजलाई २–० ले हराएका छन् । सिटी र पोर्टो यसअघि नै नकआउट चरण पुगिसकेका छन् । समूह ‘डी’ मा लिभरपुल र मिडट्जल्यान्डले १–१ को बराबरी खेले । यस्तै एटलान्टाले आयाक्सलाई १–० ले हरायो ।
यो जितपछि एटलान्टा पनि नकआउट चरण पुग्न सफल रह्यो । समूह ‘एच’ को दोहोर्याएर खेलाइएको खेलमा नेयमारको ह्याट्रिक मद्दतमा पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले इस्तानबुल बासाकसेरलाई ५–१ ले हरायो । रंगभेदी व्यवहारको आरोपबीच मंगलबार हुनुपर्ने यो खेल रद्द गरिएको थियो ।
प्रकाशित : मंसिर २५, २०७७ ०८:०१